किन हुन्छ पटक-पटक नेपाल–भारत सीमास्तम्भ गायब ? – Himal Post | Online News Revolution
दशैँमा खसी बोका किन्दै हुनुहुन्छ? सिङ हेरेर मात्र किन्नुहोस !
himal post २०७४, २८ पुष ०७:२१ January 12, 2018
१० वर्षे योजना अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य सुरु भएको हो । तीमध्ये ४ वर्ष वितिसकेको छ। सन् २०१७ डिसेम्बर २५ तारिखदेखि टोली नम्बर २ सुरु गरेको कामको प्रतिवेदन २०१८ जनवरी २० सम्ममा बुझाउँनेछ भने मई २०१८ सम्ममा सम्पूर्ण सर्वेक्षण कार्य सकिनेछ ।
टोली नम्बर २ को नेपालतर्फ १३ जना तथा भारतीयतर्फका १६ जना सर्वेक्षणमा खटिएका छन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
पेन्सनमा मात्रै ४५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च